सुनेनौ की रुकुम पश्चिमको उदण्ड ? « Postpati – News For All
आज एकैदिन १४ अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड उडान
सरकार रोग र भोकबाट देशवासीलाई जोगाउने दायित्वबाट पछि हट्दैन: प्रधानमन्त्री (सम्बोधनको पूर्णपाठ)
जाजरकोट पहिरोमा ५ जनाको शव फेला, १० जना अझै वेपत्ता
गण्डकी प्रदेशमा मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुग्यो, १२ जना बेपत्ता
सुनेनौ की रुकुम पश्चिमको उदण्ड ?
दिपा बुढा मगर पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट
दिपा बुढा मगर, प्रकृतिले समान रुपमा उपहारस्वरूप मान्छेको जन्म दियो तर मान्छे भएर जन्मेर पनि मान्छेलेनै मान्छेलाई पशुको दर्जामा राखेको छ । पशुपन्छिमा त बाच्न पाउने अधिकार हुन्छ भने आजको यो युगमा पनि मान्छे भएर बाच्न पाउने अधिकारहरु खोसिएको छ । प्रेमको सार्बभौम अधिकार खोसिएको छ । अचम्म लाग्दैन ?
रुकुम पश्चिममा एकजना नबराज मान्छेले आफ्नो प्रेमको आहुती दिए । हामी दन्तेकथामा सुन्दै आएका कुराहरु आज आफ्नै जमानामा घट्यो । अनौठो लाग्छ ।
कहाँ गयो राज्य ? राज्यको नियमकानुन ? कहाँ गए ती मानबअधिकारबादीहरु ? कहाँ गयो मानबता र मानबिय ? यो दुनियाँमा जातपात भन्ने कुरा नेपाल भारत लगायत केही दक्षिण एसियामा मात्रै सिमित छ । जहाँ हिन्दु धर्म हुन्छ त्यहाँ जात प्रथा हुन्छ । बिरोध धर्मको होइन, असमानताको हो । कसैको आस्थामा चोट पुग्न गएमा माफी चाहन्छु ।
म बाहुन समुदायको बिरोधी पक्कै होइन तर ब्राह्मणबादको घोर बिरोधी हुँ । दुनियाँमा थुप्रै ठाउँमा बर्ग बिभाजनहरु भए, वर्ण बिभाजनहरु भए, श्रम बिभाजनहरु भए तर दक्षिण एसियामा पैंतीस सय बर्ष अगाडी गरिएका वर्ण बिभाजनको परिणाम हामी अझै भोगिरहेका छौँ ? जातको उत्पतीको मुल कारण यहि हो ।
सोचौं बालक आमाको पेटबाट भर्खरै भुइँमा झर्दा उ कुन भाषामा रुन्छ ? कुन जातको स्वभाब झल्काएर रुन्छ ?
मात्र उसको भाषा भनेको च्याच्या नै हो । यो च्याच्या कुन भाषा हो ? कुन धर्म हो ? कुन जाती हो ? कुन भुगोलको आवाज हो ?
बैज्ञानिक प्रमाणानुसार मात्र तीन वर्ण छ दुनियाँमा । त्यो हो १. मङ्गोल २. आर्य र ३. निग्रो (हप्सी) । यो बाहेक दुनियाँमा कुनै पनि जात छैन । यदि छ भने त्यो फेक हो ।
घाम उडाउँछ, सबैको लागि भनेर उडाउँछ । हावा सबैको लागि समान रुपमा बहन्छ । प्रकृतिको लागि हामी सबै बराबरी हो, सराबरी हो । मानिसलाई समान रुपले बाच्नको लागि प्रकृतिले जन्म दिएको हो । यहाँ न तेरो छ, न मेरो छ । सबैको हकअधिकार समान छ । प्रेम गर्न सबैलाई अधिकार छ । प्रक्रुतिले न जातपात छुट्टाएको हुन्छ, न धर्म संस्कार छुट्टाएको हुन्छ्ह, न रङ्गभेद न छुट्टाएको हुन्छ । यदि छुट्टाएको छ भने यो सबै फेक कुरा हो ।
जसरी अफ्रिकामा रंगभेद थियो, नेल्सन मन्डेलाले त्यो रंगभेदलाई चकनाचुर पारे । त्यसरी नै नेपालमा वर्ण भेद छ । जातिय भेद छ । यसको पनि चिहान खन्न जरुरी छ । कथित जातिय पृथकताबादी मान्छेहरुले जति घोक्रो फुलाएर रुकुम पश्चिममा घटेको घटनालाई जातिय बिभेदले घटेको घटना होइन भने कराए पनि सत्य बाहिर आइसकेको छ । प्रशासन किनबेच हुनसक्छ, कानुनका धाराहरु बदलिन सक्छ, न्यायाधीशहरु प्रभावमा पर्न सक्नुहुन्छ, फैसला नबराज बिकको बिपक्षमा पनि हुनसक्छ । हामीलाई थाहा छ, यो हुनसक्छ । इतिहासमा पनि भएका थिए ।
नेपालमा यो वर्ण र जातिय भेदको अन्त्य हुनैपर्छ । मानबले मानबलाई चिन्नुपर्छ । माबबियता हुनैपर्छ, झल्काउनै पर्छ । होइन भने यो समाज समाजमा अकाल्पनिय बिद्रोहमा जान्छ । सबै सचेत हुन जरुरी छ । यसैमा मानव भएर जन्मिनुको सार्थक रहने छ ।
नेपालमा वर्ण भेदको हाबी छ। जसले गर्दा आज नबराज बिक जस्तो युवाहरुले अकाल्मै अमुल्य जीवन गुमाउनु परेको छ । बर्ग मुक्तिको नाममा दस बर्ष भएको माओवादी जनयुद्धको प्रतिफल यहि हो त ?
छुवाछूत मुक्त क्षेत्र घोषणा भनेको केवल देखाउनको लागि गरिएको रहेछ भनेर यहाँ प्रष्ट भएको छ । जनार्दन शर्माले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले उनमा पनि बाहुनबाद हावी भएको बुझ्न सकिन्छ । उनले यो घटनालाई जातिय बिभेदको रुपमा लिन नचाहनुको कारण यहि हो ।
अब नबराजले न्याय पाउँछ पाउँदैन ? रुकुम पश्चिमका जनप्रतिनिधि जनार्दन शर्माको ठूलो परिक्षाको समय आएको छ ।
अहिले देशभरी नारा लागिरहेको छ-
भोग्यौं अनेकौ तन्त्र, अझै नि बिभेदले घेरेको ।
हामी रोईरहेका छौँ, हामीलाई हेरेर नहास्नुहोस ।
हामी माथी राजनिती नगर्नुहोस् ।
बोल पिएम अब त बोल, बोल्दैमा अछुत त नहोला ।
सुनेनौ कि रुकुमको उदण्ड, बोल्दैनौ त प्रचण्ड ।
बुझबुझ ए साथीभाई, सन्चो छ कि बिसन्चो छ देउवालाई ।
मिडियालाई हाम्रो सलाम छ, धेरै छलछाम छ ।
यो नारा यो देशले सुन्छ सुन्दैन ?
२०७७ जेष्ठ १६,शुक्रबार को दिन प्रकाशित
देश बिकासको लागि एमसिसि नै चाहिन्छ ?
भुम्या पर्व नाम कसरी रहन गयो ?
दलित भित्रको दलित र विभेदता भित्रको विभेद :
भारतीय टेलिभिजनको प्रसारण रोकेकोमा सरकारले निकाल्यो यस्तो विज्ञप्ति
अहिलेकै अवस्थामा यातायात सञ्चालन नगर्ने यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको निर्णय
सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे बोल्यो महासंघ
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ३३औँ व्यक्तिको मृत्यु
नेपालको नयाँ नक्साबारे भारतले नेपाललाई पठायो कूटनीतिक नोट
उपत्यकामै २ सय ३९ संक्रमित, राजधानीका चारै कोरोना अस्पताल भरिए